Minisiteran’ny Fitsarana : vaindohan-draharaha ny ady amin’ny kolikoly | NewsMada
Minisiteran’ny Fitsarana : vaindohan-draharaha ny ady amin’ny kolikoly
“Mametraka ho vaindohan-draharahan’ny minisiteran’ny Fitsarana ny ady amin’ny kolikoly, ny fametrahana fitsarana mahaleo tena: tsy miangatra, manaja ny zon’olombelona, azo antoka ary mirindra.” Anisan’ny kabarin’ny minisitry ny Fitsarana Rasolo Elise Alexandrine, tamin’ny lanonam-pitokanana fotodrafitrasa teny amin’ny fitsarana Anosy, afakomaly, tao anatin’ny fankalazana ny faha-56 taon’ny fitsarana tampony.
Fanamafisana orina ny tany tan-dalàna izany. Mba tsy ho filamatra fotsiny ny maha fialofan’ny osa sy andry iankinan’ny malemy ny fitsarana. Anisan’ny dingana mankany amin’ny fanamafisana izany ady amin’ny kolikoly izany àry ny fametrahana tsy ho ela intsony ny fitsarana iadiana amin’ny kolikoly.
Mitarika ny sain’ireo mpiara-miasa rehetra izy fa fotoana hiovana ny toe-tsaina izao mba hialana amin’ny fomba fanao hamohehatra hanondroan’ny olona molotra ny fitsarana. Satria manakona ny ezaka maro efa vita sy ny ezaka mbola hatao amin’ny famerenana ny hasin’ny fitsarana ny fanaon’ireo fandoto iray tandroka.
Meteza àry hiara-kientana, hiray fo sy saina, hanatratra izany tanjona mahafinaritra izany.
“Fa tsy ho lany andro amin’ny fanaratsiana sy fitsikerana, izay tsy hitondra voka-tsoa na ho an’iza na ho an’iza”, hoy izy.